IKHAYA - Uhambo
uhambo A Journey of Hope to Prevent HIV
YINTONI UPHONONONGO LWESITOFU?
Isitofu sifundisa amajoni omzimba ukuthintela ulosuleleko okanye silwe nesifo esithile. Amajoni akukhusela kwisifo. Ukuze kuveliswe isitofu, abaphandi bafanele basivavanye ebantwini. Uphononongo lwesitofu luvavanya into yokokuba ingaba izitofu zikhuselekile na (azibangeli zingxaki zempilo) nento yokokuba ingaba amajoni emizimba yabantu ayasabela na kwizitofu zophononongo. Kwakhona uphononongo lwesitofu lungasetyenziselwa ukufumanisa ukuba ingaba izitofu ziyaluthintela okanye ziyalulwa ulwaseleleko okanye isifo esithile. Kwenziwa iintlobontlobo zophononongo lwesitofu ukuze kuveliswe isitofu esikhuselekileyo nesisebenzayo.
INGABA IMPILO NAMALUNGELO ABATHATHI-NXAXHEBA AZA KUKHUSELWA NJANI?
Ukukhusela impilo nokuhlonipha amalungelo abathathi-nxaxheba kuyinto ephambili kumntu wonke kwi-HVTN. Abasebenzi bekliniki yophando baza kunika abathathi-nxaxheba ulwazi olumalunga neemveliso kunye neenkqubo zophononongo, imingcipheko enokubakho kunye neenzuzo zokuthath’ inxaxheba, nangamalungelo abanokuba nawo njengabathathi-nxaxheba. Umntu unelungelo lokuthi ewe okanye hayi malunga nokuba angalujoyina okanye angalujoyini uphononongo.
Ngexesha lophononongo, abasebenzi bekliniki yophando baza kubek’ esweni abathathi-nxaxheba rhoqo ukuqinisekisa ukuba izitofu zophononongo azibangeli naziphi na iingxaki zempilo. Kwakhona abasebenzi bekliniki yophando baza kubuza abathathi-nxaxheba malunga nazo naziphi na iingxaki zentlalo abanokuba nazo ngenxa yokuba kolu phononongo kwaye baza kubanceda ekuzisombululeni.
Kukho namanye amaqela abandakanyekayo ekukhuselweni kwamalungelo nempilo-ntle yabathathi-nxaxheba. Iikliniki zophando ezikufutshane nawe ziza kukwazi ukukunika iinkcukacha ezithe vetshe malunga nala maqela ukuba unomdla.